ဟဂ်ဂဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / ဟဂ်ဂဲ
1:1 ရှငျဘုရငျကိုဒါရိ၏ဒုတိယနှစျတှငျ, ဆဌမလ၌, လတစ်လ၏ပထမဦးဆုံးသောနေ့၌အ, သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို လာ. ,, ဟဂ်ဂဲ၏လက်ကိုပရောဖက်ဖြင့်, ဇေရုဗဗေရှာလသလေ၏သားမှ, ယုဒအမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ယောဇဒက်၏နှငျ့ယရှေုကိုမှတျသား, ယဇ်ပုရောဟိတ်, ဟုဆို:
1:2 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ဟုဆို: ဤလူမျိုးသည်အချိန်မရောက်သေးထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေဆိုပါတယ်.
1:3 သို့သော်လည်းသခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်ဟဂ်ဂဲလက်ဖြင့်ထိုပရောဖက်တို့သည် လာ., ဟုဆို:
1:4 ဒါကြောင့်သင် paneled အိမ်များထဲ၌ကျိန်းဝပ်ရန်အဘို့အကာလဖြစ်၏, ဤအိမ်တော်ကိုစွန့်ပစ်နေစဉ်?
1:5 နှင့်ယခု, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: သင့်ရဲ့နည်းလမ်းတွေအပေါ်သို့သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို Set.
1:6 သင်အများကြီးကွဲအနည်းငယ်သာအတွက်ဆောင်ခဲ့ပြီ. သငျသညျကိုလောင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်. သငျသညျသောက် inebriated ဖြစ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်. သင်တို့သည်ဖုံးနွေးခဲ့ကြပြီမဟုတ်. အကြင်သူသည်လုပ်ခကိုစုဝေးစေ, တွင်းနှင့်အတူတစ်အိတ်ထဲ၌သွင်း ထား. သိရသည်.
1:7 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: သင့်ရဲ့နည်းလမ်းတွေအပေါ်သို့သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို Set.
1:8 တောင်တော် Ascend, သစ်သားကိုဆောင်ခဲ့လျက်အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်, ထိုသို့အကြှနျုပျကိုလက်ခံရကြလိမ့်မည်, ငါဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
1:9 You have looked for more, အကယ်စင်စစ်, it became less, and you brought it home, and I blew it away. What is the cause of this, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏? It is because my house is desolate, yet you have hurried, မိမိအိမျမှတစျဦးစီ.
1:10 ဒီအတွက်ကြောင့်, the heavens over you have been prohibited from giving dew, and the earth has been prohibited from giving her sprouts.
1:12 And Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jesus the son of Jehozadak, ယဇ်ပုရောဟိတ်, and all the remnant of the people heeded the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, just as the Lord their God sent him to them. And the people were fearful before the face of the Lord.
1:13 And Haggai,amessenger of the Lord among messengers of the Lord, spoke to the people, ဟုဆို: the Lord says, “I am with you.”
1:14 And the Lord stirred the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, ယုဒအမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, and the spirit of Jesus the son of Jehozadak, ယဇ်ပုရောဟိတ်, and the spirit of the remainder of all the people. And they entered and performed work in the house of the Lord of hosts their God,
2:1 ထိုလနှစ်ဆယ်လေးရက်နေ့တွင်နေ့က, ဆဌမလ၌, ရှငျဘုရငျကိုဒါရိ၏ဒုတိယနှစျတှငျ.
2:2 ထိုအခါသတ္တမလ၌, လတစ်လရဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ်နှစ်ဆယ်-, သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို လာ. ,, ဟဂ်ဂဲ၏လက်ကိုပရောဖက်ဖြင့်, ဟုဆို:
2:3 ရှာလသလေ၏သားဇေရုဗဗေအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, ယုဒအမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ယောဇဒက်၏နှငျ့ယရှေုကိုမှတျသား, ယဇ်ပုရောဟိတ်, နှင့်လူမျိုး၏ကျန်ရှိသောမှ, ဟုဆို:
2:4 သငျတို့တှငျကျန်ကြွင်းသောသူကားအဘယ်သူ, အဘယ်သူသည်၎င်း၏ပထမဆုံးဘုန်းအသရေအတွက်ဤအိမျတျောကိုမွငျလြှငျ? ထိုအသင်မည်သို့ယခုမြင်ရကြပါ? ဒါကြောင့်မဖြစ်, နှိုင်းယှဉ်ပါက, သင့်ရဲ့မျက်စိ၌အဘယ်မျှမဟုတ်သကဲ့သို့?
2:5 ယခုမှာအခိုင်ခံ့စေ၏လိမ့်မည်, ဇေရုဗဗေ, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ. နှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏လိမ့်မည်, ယရှေုသညျယောဇဒက်၏သား, ယဇ်ပုရောဟိတ်. နှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏လိမ့်မည်, ပွညျသူပွညျသားလူအပေါငျး, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူဖြစ်၏, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
2:6 တဖန်သင်တို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်သွားသောအခါငါသည်သင်တို့နှင့်အတူစိုက်သောသောစကားလုံးအရသိရသည်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်. ထိုအငါ၏ဝိညာဉ်သည်သင်၏အလယ်၌တည်ကြလိမ့်မည်. မကြောက်ပါနဲ့.
2:7 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏များအတွက်: တဦးတည်းအတိုချုပ်အချိန်ရှိသေး, ငါသည်မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုရွှေ့မည်, နှင့်ပင်လယ်နှင့်သွေ့ခြောက်သောမြေ.
2:8 ထိုအခါငါခပ်သိမ်းသောလူမျိုးတကာရွှေ့မည်. ထိုလူအပေါင်းတို့လူအမျိုးမျိုးတို့၏အလိုဆန္ဒရောက်လာပါလိမ့်မယ်. ထိုအခါငါဘုန်းအသရေနှင့်အတူဤအိမျကိုဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
2:9 မိုင်းငွေဖြစ်ပါသည်, နှင့်သတ္တုတွင်းရွှေဖြစ်ပါတယ်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
2:10 Great shall be the glory of this house, the last more than the first, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏. And in this place, I will bestow peace, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.
2:11 On the twenty-fourth of the ninth month, ရှငျဘုရငျကိုဒါရိ၏ဒုတိယနှစျတှငျ, the word of the Lord came to Haggai the prophet, ဟုဆို:
2:12 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: the priests question the law, ဟုဆို:
2:13 Ifaman will have carried sanctified flesh in the pocket of his garment, and the top of it touches his bread, or appetizer, or wine, or oil, or any food, shall it be sanctified? But the priests responded by saying, "အမှတ်"
2:15 And Haggai answered and he said: Such is this people, and such is this nation before my face, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, and such is all the work of their hands. And so all that they have offered there has been contaminated.
2:16 နှင့်ယခု, consider in your hearts, from this day and beyond, before stone may be placed upon stone in the temple of the Lord:
2:18 how I struck you withaburning wind, andamildew, andahailstorm, all the works of your hand, yet there was no one among you who returned to me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
2:20 Has the seed been germinated yet? And has the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree still not flourished? From this day on, ငါသည်သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလိမ့်မယ်.
2:21 And the word of the Lord cameasecond time to Haggai, on the twenty-fourth of the month, ဟုဆို:
2:22 Speak to Zerubbabel the governor of Judah, ဟုဆို: I will move both heaven and earth.
2:24 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ငါသည်သင်တို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်, Zerubbabel the son of Shealtiel, ငါ့ကျွန်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, and will set you likeaseal, for I have chosen you, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏.